अमेरिकी चुनाव २०२० : ट्रम्प र ओबामाले प्रतिद्वन्द्वी जुलुसमा प्रतिबन्धलगाए::Jalpa Khabar
अमेरिकी चुनाव २०२० : ट्रम्प र ओबामाले प्रतिद्वन्द्वी जुलुसमा प्रतिबन्धलगाए
Published on: ६ कार्तिक २०७७, बिहीबार ०४:१२
अमेरिका : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाले प्रतिद्वन्द्वी जुलुसमा एक अर्कामा ब्लिस्टर बार्बलाई निर्देशन दिएका छन्।
डेमोक्र्याटिक व्हाइट हाउसका उम्मेदवार जो बिडेनको लागि पेन्सल्भेनियामा स्टम्प गर्दै श्री ओबामाले श्री ट्रम्पलाई “पागल काका “सँग तुलना गरे र भने कि उनले जातीयवादीहरूलाई सहयोग गरे। उत्तर क्यारोलिनामा रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले २०१६ को चुनाव नतीजाको बारेमा गलत भएकोमा श्री ओबामाको खिल्ली उडाए।
यस चुनावमा १३ दिन सम्म पुग्न, श्री बिडेनको राष्ट्रिय तहमा कडा नेतृत्व। तर अमेरिकी मुट्ठी भरका राज्यहरूमा यो मार्जिन स्लिम हुँदै गएको छ कि जुनसुकै बाटोमा जान सक्छ र अन्ततः नोभेम्बरमा नतिजा निर्णय गर्न सक्छ। अमेरिकीहरू यस बर्ष रेकर्ड गतिमा भोट हाल्दै छन्, ४२ मिलियनले पहिले नै पोष्ट र व्यक्तिगत रूपमा दुबै मत दिएका छन।
ट्रम्पले के भने? श्री ट्रम्पले बुधबार साँझ आफ्नो ग्यास्टोनियामा आफ्नो जुलुसमा ह्वाइट हाउसका लागि हालका प्रजातान्त्रिक चुनौतीकर्ताको रूपमा आफ्नो अग्निपरीक्षा गरेका थिए। उनले भने कि मतदाताहरुका लागि छनौट “ट्रम्प सुपर रिकभरी” वा “बिडेन ठाडो उदासीन” बीच थियो।
श्री बिडेन टेनेसीको न्यासभिलमा बिहीबार रातमा अन्तिम राष्ट्रपति पदको बहसको तयारीको लागि हप्ता भर अभियानको निगाह बाहिर आएका छन्, जबकि श्री ट्रम्पले रणभूमि मैदानमा बार्ताएका छन।
राष्ट्रपतिले ओबामालाई पप लिनबाट रोक्न सकेनन जसले अगस्टको राजनीतिक सम्मेलन पछि पहिलो पटक पहिलो घण्टा अगाडि प्रचार अभियानमा व्यक्तिगत रुपमा हिडेका थिए।
"कुटिल हिलेरी क्लिन्टनको लागि ओबामा भन्दा कडा अभियान गर्ने कोही थिएन, हैन?" श्री ट्रम्पले जुलुसमा जाने व्यक्तिहरूलाई भने जसले आफ्ना पुराना विरोधीहरूको नामको उल्लेख गरे। "उहाँ सबै ठाउँमा थिए।"
राष्ट्रपतिले भने: "मलाई लाग्छ कि त्यस रात कुटिल हिलारी भन्दा बढी दुखी एक जना बराक हुसेन ओबामा थिए।"
रिपब्लिकन श्री ट्रम्पले पनि श्री ओबामाले२००९-२०१७ को उप-राष्ट्रपति बनेका श्री बिडेनको ह्वाइट हाउस बोलीको लागि प्रारम्भिक उत्साहको कमी रहेको बताएका थिए।
२०१६ मा, श्री ओबामाले श्री बिडेनलाई दौडमा बस्न र हिलारी क्लिन्टनलाई दौडन दिन दबाब दिएका थिए। श्रीमान ट्रम्पलाई हराउने राम्रो अवसर थियो भन्ने विश्वास राख्दै।
गत वर्ष श्री ओबामाले भनेका थिए कि डेमोक्र्याटिक नेतृत्वमा "नयाँ रगत" को आवश्यकता छ, जसलाई श्री बिडेनलाई हल्का रूपमा व्याख्या गरिएको थियो।
ओबामाले के भने?
श्री ट्रम्पलाई उनको कोरोनाभाइरस र अर्थव्यवस्था सम्बन्धी व्यवहारमाथि हमला गर्न पछि श्री ओबामा फिलाडेल्फियाको ड्राइभ-इन रैलीमा राष्ट्रपतिले ट्वीट लगाए।
उनले भने कि यदि श्री बिडेन जीते भने "हामीसंग कुनै राष्ट्रपति छैन जो उसलाई समर्थन नगर्ने कसैलाई अपमान गर्ने, वा जेल चलाउने धम्की दिने राष्ट्रपति हुने छैन। यो साधारण राष्ट्रपति व्यवहार होइन।"
श्री ओबामा - जो डेमोक्र्याटिक पार्टीको सबैभन्दा लोकप्रिय व्यक्तित्व बनेका छन् - उनले भने कि मतदाताले परिवारका सदस्यबाट यस्तो आचरण सहन गर्दैनन् "सायद पागल काकालाई बाहेक"।
रिपब्लिकन श्री ट्रम्पले पनि श्री ओबामाले २००९-२०१७ को उप-राष्ट्रपति बनेका श्री बिडेनको ह्वाइट हाउस बोलीको लागि प्रारम्भिक उत्साहको कमी रहेको बताएका थिए।